အဆိုပါ amygdala နှင့်စွဲ (2009) တွင် ဦး နှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ - သင့် ဦး နှောက် On Porn
အဆိုပါ amygdala နှင့်စွဲလမ်း (2009) တွင်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်များကို
ဦးနှောက် Res ။ 2009 အောက်တိုဘာလ 13; 1293: 61-75 ။ Pu: 10.1016 / j.brainres.2009.03.038
arousal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖျန်ဖြေသောဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များ Dysregulation မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ pathophysiology ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးဖယ်ရှားချိန်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မှီခိုပြီးအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်၏ပေါ်ထွန်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှာယူပါရန်မလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ activation အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တရားများမှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်မောင်းနှင်ကြောင်းမှီခိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်၏အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်တွေးဆသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်များ၏အာရုံစိုက်မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှစ်ခု key ကိုဦးနှောက် arousal / စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍသည်။ အလေးပေး corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအပါအဝင်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် extrahypothalamic စနစ်များအတွက် norepinephrine, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, နှင့်နျူကလိယ၏ shell ကိုတစ်ဦးအကူးအပြောင်းဧရိယာ၏ neuropharmacological လုပ်ရပ်များအပေါ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည် accumbens ။ ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသည်ဤဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ, မှီခိုနှင့်စွဲလမ်းတစ်တခါမျှအကြီးအကျယ်လျစ်လျူရှုအစိတ်အပိုင်း, မှီခိုဖို့အကူးအပြောင်းပါဝငျကြောင့်အစပျိုးနေသည်တစ်ချိန်ကမှီခိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍစောဒကတက်သည်။ စွဲလမ်းမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ anti-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်းစွဲ၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" ၏ neurobiology သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းလှုံ့ဆော်အပြုအမူလမ်းညွှန်ကြောင်းအခြေခံဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှု circuitry ၏အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ function ကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမသာ။
keywords: စွဲ, Neurobiology, စိတ်ဖိစီးမှု, Corticotropin-releasing အချက်, Norepinephrine, တိုးချဲ့ amygdala
1 ။ အယူအဆရေးရာမူဘောင်: စွဲ, စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်
မူးယစ်ဆေးစွဲစားသုံးမှုကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရှုံးရှာယူမလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ခွင့် (မှီခိုအဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်) တားဆီးသောအခါအချို့နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာတို့ကပါဝင်သည်တစ်ဦးကတတိယသော့ချက်ဒြပ်စင်အနှုတ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ် (ဥပမာ dysphoria, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်တိုတာတွေ) ၏ပေါ်ပေါက်ရေးဖြစ်ပါတယ် (Koob နှင့် Le Moal, 1997, 2008). စှဲမွဲမှု ဟူသောဝေါဟာရကိုနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ကျမ်းများတွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရာတွင်အသုံးပြုသည် ပစ္စည်းဥစ္စာမူတည် (လက်ရှိအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 4th ထုတ်ဝေ; American Psychiatric Association, 1994), ဒါပေမယ့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုရပ်တန့်နေသည်တဲ့အခါအောက်ပိုင်း-ကိစ္စတွင်နှင့်အတူ "မှီခို" "ဃ" ဟုဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည် (Koob နှင့် Le Moal, 2006) ။ ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရံဖန်ရံခါပေမယ့်ကန့်သတ်အသုံးပြုမှု အလားအလာ အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုများအတွက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးထံမှကွဲပြားသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု ခန္ဓာကိုယ်အပျေါမှာတောင်းဆိုချက်များ (များသောအားဖြင့် noxious) (မှတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်Selye, 1936) ထိုသမိုင်း hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး၏ activation ပါဝင်သည်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တက်ကြွစွာ pituitary ထံမှ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ် adrenal steroids များလွှတ်ပေးရန်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Adrenocorticotropic ဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရေး, အလှည့်၌, ပျမ်းမျှထူးမြတ်သော၏ pituitary ပေါ်တယ်သည့်စနစ်သို့ hypothalamic corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏လွတ်မြောက်မှုကိုကထိန်းချုပ်ထားသည်။ သက်ရှိများအတွက်၎င်း၏အများအပြားသရုပ်ပိုမိုသဟဇာတစိတ်ဖိစီးမှု၏တစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ homeostatic လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မည်သည့်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပါတယ်Burchfield, 1979) ။ စိတ်ဖိစီးမှု၏တည်ဆောက်မှုသည်နောက်ပိုင်းတွင်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှု (သို့) စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစနစ်များကိုအလွန်အမင်းလှုပ်ရှားခြင်း၏လွန်ကဲသောရောဂါဗေဒဆက်နွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။Hennessy နှင့် Levine, 1979; Pfaff, 2006).
မူးယစ်ဆေးစွဲ Impulse နှင့် compulsive (နှစ်ဦးစလုံး၏ဒြပ်စင်ကပါဝငျတဲ့ရောဂါအဖြစ် conceptualized ထားပြီးသဖန်းသီး။ 1). ထကြွလွယ်သော တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အခြားသူများအားဤတုံ့ပြန်မှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအဘို့နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုမှလျင်မြန်စွာ, unplanned တုံ့ပြန်မှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးတစ်ဦးချင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော ရှေးခယျြမှုအခြေအနေများတွင်မမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှု၏မျက်နှာကိုအတွက်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ဇွဲ၏မျက်နှာကိုအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်ဇွဲအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအဒြပ်စင်နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးရှာအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဖော်ပြထားအဖြစ်ပစ္စည်းမူတည်၏လက္ခဏာများနှင့်အတူမျက်နှာတရားဝင်မှုရှိသည်ဖို့တိုးလာလှုံ့ဆျောမှုရောင်ပြန်ဟပ်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအရက်မှီခို၏တိုးတက်မှုများအတွက်သိထား, နောက်ခံစိတ်ခွန်အားနိုးယန္တရားများအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီသရုပ်ဖော်။ ကနဦး, အပြုသဘောအားဖြည့်, ပျြောမှေ့စမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ မှစ. , စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့အချိန်ကျော်ဖြစ်စဉ်များ ...
Impulse နှင့် compulsive ၏သံသရာပြိုလဲသုံး stages- ပါဝင်သောပေါင်းစပ်စွဲသံသရာဖြစ်ထွန်းအဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်, Bing / မူးယစ်နှင့် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်အရာနှစ်ဆပိုများလာ Impulse မကြာခဏအစောပိုင်းအဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ခြင်းနှင့် compulsive terminal ကိုအဆင့်ဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ compulsive မှ Impulse ထံမှတစ်ဦးချင်းရွေ့လျားအဖြစ်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီ (ထိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကားမောင်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်အပြုအမူကားမောင်းအပြုသဘောအားကောင်းရာမှဖြစ်ပေါ်Koob, 2004) ။ အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ထားတဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဥပမာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်) ၏ဖယ်ရှားရေးတစ်တုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ, မှီခို-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတော်မူသောအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသုံးပါးအဆင့် ( ပို. ပြင်းထန်သောဖြစ်လာ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်အဖြစ် conceptualized နှင့်နောက်ဆုံးတွင်စွဲအဖြစ်လူသိများသည့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်မှဦးဆောင်နေကြKoob နှင့် Le Moal, 1997).
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏စာတမ်းဟာစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကဒြပ်စင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပေမယ့်ဟော်မုန်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များလွတ်လပ်သောကြောင်းဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များတစ်ဦးလေးနက် activation ကပါဝငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုနောက်ထပ် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ circuitry မှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့တွေးဆကြသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံ compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်များအတွက်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်လာသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ရန်။ ဤစာတမ်း၏အာရုံစိတ်ခံစားမှု homeostasis ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရှုပ်ထွေးသောစနစ်၏ဗဟိုဒြပ်စင်အဖြစ်စွဲလမ်းအတွက် CRF နှင့် norepinephrine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်။
2 ။ ဟော်မုန်းစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ: hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး
အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယက, pituitary gland ၏ anterior ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, နှင့်သုံးသပ်ချက်ကိုများအတွက် adrenal gland (တွေ့: အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးသုံးခုကိုအဓိကအဆောက်အဦများ၏ဖွဲ့စည်းထားသည် Smith ကနှင့်ခြိုငျ့, 2006) ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ medial parvocellular subdivision အတွက် Neurosecretory အာရုံခံအဆိုပါ anterior pituitary gland ရိုက်ထည့်သောပေါ်တယ်သွေးကြောထဲသို့ CRF synthesize နှင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အဆိုပါ CRF မှ CRF ၏ binding1 pituitary corticotropes အပေါ်အဲဒီ receptor ဟာစနစ်တကျလည်ပတ်သို့ ACTH များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အလှည့်အတွက် Adrenocorticotropic ဟော်မုန်းဟာ adrenal cortex ကနေ glucocorticoid ပေါင်းစပ်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယနှင့် hippocampus: အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးထုနှစ်ခုအဓိကဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် glucocorticoid receptors အပေါ်ပြုမူကြောင်း glucocorticoids ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကနေအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်ဖမ်းယူနားဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏ hypophysiotropic အာရုံခံ brainstem အခြား hypothalamic အရေးပါနှင့် forebrain limbic အဆောက်အဦထဲကနေအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ afferent စီမံချက်များကြောင့် innervated နေကြသည်။
3 ။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ: corticotropin-releasing အချက်နှင့် norepinephrine
Corticotropin-releasing အချက်တစ် 41 အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားကြောင်း polypeptide, စာနာနှင့်ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ homology နှင့်အတူအခြားအ peptides, အထူးသ urocortin မိသားစု (urocortins 1,2နှင့် 3) ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, (စိတ်ဖိစီးမှအမူအကျင့်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုအတွက် CRF စနစ်များများအတွက်ကျယ်ပြန့် neurotransmitter အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004; Hauger et al ။ , 2003) ။ သိသိသာသာ CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆိုပါ neocortex, တိုးချဲ့ amygdala, medial septum, hypothalamus, thalamus, cerebellum နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ midbrain နှင့် hindbrain အရေးပါ (များတွင်လက်ရှိဖြစ်ပါသည်ချာလ်တန် et al ။ , 1987; Swanson et al ။ , 1983) ။ urocortin 1 စီမံကိန်း၏ဖြန့်ဖြူး CRF နှင့်ထပ်ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ်, အမြင်အာရုံ, somatosensory, အာရုံ, vestibular, မော်တာ, tegmental, parabrachial, pontine, ပျမ်းမျှ raphe နှင့် cerebellar အရေးပါ (အပါအဝင်Zorrilla နှင့် Koob, 2005) ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor CRF နှင့် urocortin 1 ၏ဖြန့်ဝေနှင့်အတူသိသိသာသာထပ်နေသည်သောဦးနှောက်ထဲမှာအပေါများ, ကျယ်ပြန့်စကားရပ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ endogenous ရွေးချယ် CRF2 agonists-အမျိုးအစား2urocortins urocortin2(Reyes et al ။ , 2001) နှင့် urocortin3(Lewis က et al ။ , 2001) -differ သူတို့ရဲ့ neuropharmacological profile များကိုများတွင် urocortin 1 နှင့် CRF မှ။ Urocortins2နှင့်3အဆိုပါ CRF အဘို့အမြင့်မားအလုပ်လုပ်တဲ့ selection ကိုပြသ2 CRF နှင့် urocortin 1 သူတို့ထံမှကွဲပြားဖြစ်ကြောင်း neuroanatomical ဖြန့်ဝေအဲဒီ receptor နှင့်ရှိသည်။ Urocortins2နှင့်3အဆိုပါ CRF ဖော်ပြကြောင်း hypothalamic အရေးပါအတွက်အထူးအဓိကဖြစ်ကြောင်း2 အဆိုပါ supraoptic နျူကလိယက, paraventricular နျူကလိယ၏ magnocellular အာရုံခံနှင့် forebrain, အ ventromedial hypothalamus အပါအဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယနှင့် medial နှင့် cortical amygdala အပါအဝင်အဲဒီ receptor, (လီ et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ CRF2 (က) အဲဒီ receptor isoform အဆိုပါ CRF / urocortin 1 / CRF သူတို့ထံမှကွဲပြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အာရုံခံဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်1 ထိုကဲ့သို့သော ventromedial hypothalamic နျူကလိယက, hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ, supraoptic နျူကလိယ, နျူကလိယ Tractus solitarius, ဧရိယာ postrema, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်အဲဒီ receptor စနစ်, ။
Norepinephrine α, receptors သုံးခုကွဲပြားမိသားစုများချည်နှောင်1, α2နှင့်β-adrenergic သုံးအဲဒီ receptor Subtype (ရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီရာRohrer နှင့် Kobilka, 1998) ။ အဆိုပါα1 အဲဒီ receptor မိသားစုαပါဝင်သည်1a, α1bနှင့်α1d။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးကွဲ phospholipase ကို C မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် G-ပရိုတိန်း, G မှတဆင့် inositol ဖော့စဖိတ်ဒုတိယတမန်စနစ် coupled ဖြစ်ပါတယ်q။ တစ်ဦးကဗဟိုတက်ကြွα1 မူးယစ်ဆေးမှီခိုသုတေသနများတွင်အသုံးပြုအဲဒီ receptor ရန် prazosin ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါα2 မိသားစုαပါဝင်သည်2a, α2bနှင့်α2c။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးကွဲအဆိုပါ inhibitory, G-ပရိုတိန်း, G ဖို့နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့် adenylate cyclase ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်i။ နှစျခုα2 လေ့မူးယစ်ဆေးမှီခိုသုတေသနများတွင်အသုံးပြုမူးယစ်ဆေးဝါးαများမှာ2 agonist clonidine နှင့်α2 ရန် yohimbine ။ အဆိုပါβ-adrenergic အဲဒီ receptor မိသားစုβပါဝင်သည်1, β2နှင့်β3။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးကွဲ G-ပရိုတိန်း, G ဖို့နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့် adenylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင်s။ အနည်းငယ်β-adrenergic မူးယစ်ဆေးဝါးများယူဆရသောကွောငျ့ဆငျးရဲသောဦးနှောက် bioavailability ၏, ထိုβ-adrenergic ရန် propranolol ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးမှီခိုသုတေသနအတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် CRF စနစ်များနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် norepinephrine စနစ်များ၏သိသာအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ pons နှင့် Basal forebrain ၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာ feed ကို-ရှေ့ဆက် system အဖြစ် Conceptualized, CRF norepinephrine မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း, အလှည့်အတွက် norepinephrine (CRF မြှင့်လုပ်ဆောင်Koob, 1999) ။ အများကြီး pharmacologic, ဖြစ်စဉ်နှင့်ခန္ဓာဗေဒသက်သေအထောက်အထား (ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက် locus coeruleus ၏ဒေသတွင်း၌တစ်ဦး CRF-norepinephrine အပြန်အလှန်များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါသည်Valentino et al ။ , 1991, 1993; ဗန် Bockstaele et al ။ , 1998) ။ သို့သော် norepinephrine အစကို (hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်Alonso et al ။ , 1986), အိပ်ရာပု stria terminalis ၏နျူကလိယကို၎င်း, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ။ ထိုသို့သောအစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်စနစ်များကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသက်ရှိများ၏စည်းရုံးခြင်းများအတွက်အစွမ်းထက်အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုရှိသည်ဖို့တွေးဆခဲ့ကြပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောယန္တရား (ရောဂါဗေဒမှအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်Koob, 1999).
4 ။ တိုးချဲ့ amygdala: စိတ်ဖိစီးမှု၏ interface နဲ့စွဲ
မကြာမီက neuroanatomical ဒေတာနှင့်အသစ် functional ဖြစ်စေလေ့လာတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးစွဲများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအများအပြားများအတွက် neuroanatomical အလွှာဟာ Basal forebrain အတွင်းသီးခြားခွဲထွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောတစ်ဘုံအာရုံကြော circuitry ပါဝင်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆများအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များပေးခဲ့ကြ, (က "တိုးချဲ့ amygdala" ဟုချေါAlheid နှင့် Heimer, 1988) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အများအပြား Basal forebrain အဆောက်အဦများ၏ရေးစပ်တစ်နိုင်တဲ့ macro-ဖွဲ့စည်းပုံကိုကိုယ်စားပြု: အ stria terminalis အလယ်ပိုင်း medial amygdala တို့နှင့် medial နျူကလိယ accumbens (ဆိုလိုသည်မှာ posterior shell ကို) ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်၏အိပ်ရာနျူကလိယ (Johnston, 1923; Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ ဤရွေ့ကားအဆောက်အဦများ (shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, immunohistochemistry နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်တူညီကြAlheid နှင့် Heimer, 1988), နှင့်သူတို့ limbic cortical, အ hippocampus, basolateral amygdala, midbrain နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထံမှ afferent ဆက်သွယ်မှုလက်ခံရရှိသည်။ ဤရှုပ်ထွေးထံမှ efferent ဆက်သွယ်မှုပု posterior medial (sublenticular) ventral pallidum, ventral tegmental ဧရိယာ, အမျိုးမျိုးသော brainstem စီမံချက်များနှင့်ဖြစ်ကောင်းအမြင်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့ point ကနေအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (ရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ projection ပါဝင်သည်Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ၏ Key ကိုဒြပ်စင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ် neurotransmitters, ဒါပေမယ့်လည်းမှီခို၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်နှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို (သာပါဝင်သည်Koob နှင့် Le Moal, 2005).
5 ။ မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက် CRF နှင့် norepinephrine တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက် Pharmacological သက်သေအထောက်အထား
အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence မှတစ်ဘုံတုံ့ပြန်မှုစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကအလွဲသုံးစားမှုများအားလုံးကိုအဓိကမူးယစ်ဆေးမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုထင်ရှားခဲ့ကြ (သဖန်းသီး။ 2) ။ အဆိုပါမှီခို variable ကိုမကြာခဏဝတ္ထုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု, ထိုကဲ့သို့သောလွင်ပြင်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်အားသတ္တုစုံစမ်းစစ်ဆေး၏ခုခံကာကွယ်မွှေးအဖြစ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု, ရန်တက်ကြွသောတုန့်ပြန်နေတဲ့ passive တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ CRF ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပြောင်းပြန်နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္နှင့်ကာကွယ်ရေးမွှေးစမ်းသပ်မှု, (တစ် anxiogenic ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်Sarnyai et al ။ , 1995; Basso et al ။ , 1999) ။ opioid မှီခိုအတွက်မိုးရွာသွန်းမှုရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်Schulteis et al ။ , 1998; Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1993) ။ opioids ထံမှမိုးရွာသွန်းမှုရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (ရာအရပျဆန္ဒရှိထုတ်လုပ်Stinus et al ။ , 1990) ။ ဤတွင်, အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုမှမတူဘဲ, opioids မှမိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာလျှက်နေစဉ်အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ကြွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ဦး unpaired ပတ်ဝန်းကျင်အကြားရွေးချယ်မှုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါဆုတ်ခွာ-တွဲပတ်ဝန်းကျင်တွင်လျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ တစ်ဦး CRF ၏ system administrator1 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်တစ်ဦး peptide CRF တိုက်ရိုက် intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန်လည်း (opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျဆန္ဒရှိလျော့နည်းသွားStinus et al ။ , 2005; Heinrich et al ။ , 1995) ။ functional noradrenergic ရန် (ဆိုလိုသည်မှာ, β1 ရန်နှင့်α2 agonist) (opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိတ်ဆို့Delfs et al ။ , 2000).
အီသနော, နီကိုတင်း, ကိုကင်းများနှင့် opioid စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်တစ်ဦး CRF ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ အဆိုပါ CRF peptide ရန်α-helical CRF ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး (က) Effect9-41 ဓါတ်လှေကားပေါင်းဝင်္အတွက်စမ်းသပ်ပြီးကြွက်များတွင် ...
အီသနောဆုတ်ခွာ CRF ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုထုတ်လုပ်1/ CRF2 peptidergic ရန် (Baldwin et al ။ , 1991တစ်ဦး peptidergic CRF ၏), intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 အဆိုပါ amygdala သို့ရန် (Rassnick et al ။ , 1993), နှင့်အသေးစားမော်လီကျူး CRF ၏စနစ်တကျထိုး1 ရန် (Knapp et al ။ , 2004; Overstreet et al ။ , 2004; funk et al ။ , 2007) ။ intracerebroventricularly သို့မဟုတ်စနစ်တကျထိုးသွင်း CRF ရန်လည်း (နာတာရှည်အီသနောထံမှအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားဖို့ potentiated စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့Breese et al ။ , 2005; Valdez et al ။ , 2003) ။ နီကိုတင်းကနေမိုးရွာဆုတ်ခွာ (စ CRF ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်Tucci et al ။ , 2003; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) ။ CRF ရန်ဤသက်ရောက်မှုကို (amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီRassnick et al ။ , 1993).
6 ။ စူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆိုးကျိုးများအတွက် CRF နှင့် norepinephrine တစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက် Neurochemical သက်သေအထောက်အထား
အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်စေ Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ် passive အုပ်ချုပ်မှုကနေတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်တိုင်းတာသည့်တိုးချဲ့ amygdala ကနေ extracellular CRF တိုးပွါး Vivo အတွက် microdialysis (သဖန်းသီး။ 3) ။ 12 ဇဘို့ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို (amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ dialysates အတွက် extracellular CRF တိုးလာငလျင်နှင့် Weiss, 1999) ။ ကြွက်များတွင်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်တောင့် implantation ပြီးနောက်သွေးဆောင် Opioid ဆုတ်ခွာခြင်း (amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် extracellular CRF တိုးလာWeiss et al ။ , 2001) ။ acute နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေဆုတ်ခွာခြင်း (Basal forebrain အတွက် extrahypothalamically CRF မွှငျ့တငျMatta et al ။ , 1997) ။ တိုးမြှင့် CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းနှင့်ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော phenotype ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Slawecki et al ။ , 2005) ။ Extracellular CRF (minipump မှတဆင့်အုပ်ချုပ်နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေမိုးရွာဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယတိုးမြှင်ခံရဖို့ပြသထားသည်ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) ။ အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း extrahypothalamic CRF စနစ်များ (စူးရှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းမှီခိုကြွက်များ၏ stria terminalis (2-12 ဇ) ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း extracellular CRF တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်, hyperactive ဖြစ်လာfunk et al ။ , 2006; Merlo-Pich et al ။ , 1995; သံလွင် et al ။ , 2002) ။ နာတာရှည် cannabinoid ထိတွေ့မှုကနေမိုးရွာရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (ထို amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF တိုးလာRodriguez က de Fonseca et al ။ , 1997) ။ စုစုပေါင်းကဤရလဒ်များကိုအလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်တိုင်းတာ CRF ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသာများပြားထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသ Vivo အတွက် နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအပြီးစူးရှသောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း microdialysis ။
(က) microdialysis ကဆုံးဖြတ်ကြွက် amygdala အတွက် CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity (CRF-L-မှာ IR) အပေါ်အီသနောဆုတ်ခွာသက်ရောက်မှု။ Dialysate မှန်မှန် nonsampling2ဇကာလနှင့်အတူ alternated လေး2ဇကာလကျော်စုဆောင်းခဲ့သည်။ စာအဆက်အသွယ်လေးပါးနမူနာကာလ ...
Norepinephrine ရှည်လျားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်က activated ခံရဖို့တွေးဆခဲ့သည်။ Opioids (အ locus coeruleus အတွက် noradrenergic အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်လျော့နည်းသွား, နှင့် locus coeruleus opioid ဆုတ်ခွာစဉ်က activated ခဲ့သည်Nestler et al ။ , 1994) ။ အဆိုပါ locus coeruleus noradrenergic system ပေါ်တွင်အဆိုပါနာတာရှည် opioid သက်ရောက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် tyrosine hydroxylase ၏တိုးလာစကားရပ် (အချက်ပြသည့်သိသိ adenosine monophosphate (Camp) ၏ upregulation ပါဝင်မှလေ့လာမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်စီးရီးမှာပြခဲ့ကြNestler et al ။ , 1994) ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ neurotrophic အချက်များ (ဥပမာ, ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်နှင့် Non-noradrenergic အာရုံခံကနေ neurotrophin-3) (ပု locus coeruleus noradrenergic လမ်းကြောင်းအတွက် opiate-သွေးဆောင်မော်လီကျူး neuroadaptations များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုAkbarian et al ။ , 2001, 2002) ။ သိသိသာသာသက်သေအထောက်အထားလည်းတိရစ္ဆာန်နဲ့လူသားတို့အလယ်ပိုင်း noradrenergic စနစ်များကိုအီသနောထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်က activated ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိနိုင်ပါသည်။ လူသားများတွင်အရက်ဆုတ်ခွာ (cerebrospinal fluid အတွက် noradrenergic function ကို၏ activation နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Borg et al ။ , 1981, 1985; Fujimoto et al ။ , 1983) ။ နာတာရှည်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (23 ဇလက်လှမ်း) (ပု hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်တိုးလာSharp ကနှင့် Matta, 1993; ဖူ et al ။ , 2001) နှင့် amygdala (ဖူ et al ။ , 2003) ။ သို့သော်နီကိုတင်းဖို့ 23 ဇလက်လှမ်းများ၏နှောင်းပိုင်းကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်စဉ်အတွင်း, norepinephrine အဆင့်ဆင့်မရှိတော့ (အချို့ desensitization / သည်းခံစိတ်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်အကြံပြုသည် amygdala အတွက်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျဖူ et al ။ , 2003).
7 ။ ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် CRF နှင့် norepinephrine များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ Pharmacological သက်သေအထောက်အထား
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏တူသော-anxiogenic နှင့်ဆန္ဒရှိကဲ့သို့စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ဖို့ neuropharmacological အေးဂျင့်များ၏စွမ်းရည်ကိုမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်ဤအေးဂျင့်များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမူးယစ်ဆေးသွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးချဲ့အစည်းအဝေးများဖို့တိရစ္ဆာန်များ၏ထိတွေ့မှုပါဝင်ပတ်သက်နေ (ကိုကင်း,6ဇ; ဘိန်းဖြူ, 12 ဇ; နီကိုတင်း, 23 ဇ) နှင့် passive ငွေ့ထိတွေ့မှု (/ 14 ဇချွတ်အပေါ် 12 ဇ) များအတွက် အီသနော။ တိရစ္ဆာန်များထို့နောက်အီသနောအဘို့အ 2-6 ဇထံမှနီကိုတင်းနှင့်အတူရက်ပေါင်းအထိဆုတ်ခွာသို့အမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ CRF ရန်ရွေးချယ်ကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထပ်တိုးခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့Specio et al ။ , 2008), နီကိုတင်း (ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) နှင့်ဘိန်းဖြူ (Greenwell et al ။ , 2009a) ။ CRF ရန်လည်း (မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနောဒတိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့funk et al ။ , 2007()စားပွဲတင် 1, သဖန်းသီး။ 4).
မှီခိုအတွက် CRF ၏အခန်းက္ပ
သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး CRF ၏ဆိုးကျိုးများ1 မှီခိုကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အဲဒီ receptor ရန်သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး CRF ၏ (က) Effect1 မှီခိုနှင့် nondependent ကြွက်များတွင်အရက် (ဆ / ကီလိုဂရမ်) ၏အော်ပရေတာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အဲဒီ receptor ရန် MPZP ။ စမ်းသပ်ခြင်းခဲ့သည် ...
ရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအပေါ်ဗဟိုပြုထားသောဤ CRF ဖြန်ဖြေဦးနှောက်အတွက်တိကျသော sites များအတွက်အထောက်အထား။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်း CRF ရန်၏ထိုး (မိုးရွာသွန်းမှု opioid ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့Heinrich et al ။ , 1995) နှင့်အီသနောဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများပိတ်ဆို့ (Rassnick et al ။ , 1993) ။ အဆိုပါ CRF ၏ Intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန် D-ဖီ CRF12-41 (စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့Valdez et al ။ , 2004; Rimondini et al ။ , 2002) ။ တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ, D-ဖီ CRF ၏အနိမ့်ဆေးများသို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါ12-41 အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်ပိတ်ဆို့အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (funk et al ။ , 2006) ။ တစ်ဦးက CRF2 agonist, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ထိုးသွင်း urocortin3လည်း (အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့funk et al ။ , 2007), တစ်ဦးအပြန်အလှန် CRF အကြံပြုခြင်း1/ CRF2 ကြွက်များတွင်ငွေထုတ်-သွေးဆောင်အရက်သောက်၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေရန်အထောက်အကူပြုသည့် amygdala (များ၏အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွက်အရေးယူဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004).
ဤရွေ့ကား data တွေကိုမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း CRF များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, အကြံပြုနှင့် Basal forebrain အတွက် CRF လည်းဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါအကြံပြု သောတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံကိုကင်း, ဘိန်းဖြူများနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်မောင်းတယ်။
ပံ့ပိုးမှုလည်းမှီခိုနှင့်ဆက်စပ်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် norepinephrine စနစ်များတစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်တည်ရှိ။ သိသာထင်ရှားသောသက်သေအထောက်အထားဗဟိုအာရုံကြောစနစ် norepinephrine နှင့်အီသနောအားဖြည့်ခြင်းနှင့်မှီခိုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ အစောပိုင်းလေ့လာမှုများတစ်စီးရီးမှာတော့ဖြစ်သူ Amit နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှု (noradrenergic function ကို၏ရွေးချယ် pharmacological နှင့် neurotoxin-တိကျတဲ့ပြတ်တောက်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ယုတ်လျော့ခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သAmit et al ။ , 1977; ဘရောင်းနှင့် Amit, 1977) ။ ရွေးချယ် dopamine β-hydroxylase inhibitors ၏အုပ်ချုပ်ရေး (ယခင်ကအရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များတွင်အရက်စားသုံးမှု၏သိသိသာသာဖိနှိပ်မှုထုတ်လုပ်Amit et al ။ , 1977) ။ လွန်ကဲကဲကုန်ခမ်း norepinephrine အာရုံခံလည်းကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုပိတ်ဆို့ကြောင်းဆေးများမှာ neurotoxin 6-hydroxydopamine ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေး (ဘရောင်းနှင့် Amit, 1977; Mason ဆို et al ။ , 1979) ။ အီသနော၏ Intragastric Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း (dopamine β-hydroxylase တားစီးပိတ်ဆို့ခဲ့သည်Davis က et al ။ , 1979) ။ မြင့်မားသောအီသနော-စားသုံး C57BL / 6J ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် norepinephrine ၏ရွေးချယ်လျော့ကျအီသနောစားသုံးမှုလျော့နည်းသွား (Ventura et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ dopamine β-hydroxylase ဗီဇ၏နောက်ကောက်ကနေတဆင့်ဦးနှောက် norepinephrine ၏နောက်ကောက်နှင့်အတူကြွက် (အီသနောများအတွက်လျှော့ preference ကိုရှိWeinshenker et al ။ , 2000).
ပိုပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများက, αအတွက်1 noradrenergic အဲဒီ receptor ရန် prazosin (အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့Walker က et al ။ , 2008ကိုကင်းရန်), တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့် (Wee et al ။ , 2008), နှင့် opioids ထပ်တိုးခွင့် (Greenwell et al ။ , 2009b()စားပွဲတင် 2, သဖန်းသီး။ 5) ။ ထို့ကြောင့်စုဆုံဒေတာကြောင့် noradrenergic neurotransmission မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ကြောင်း noradrenergic function ကိုလုပ်ကွက်များပြတ်တောက်အီသနောအားဖြည့်, မြားနှငျ့ noradrenergic functional ဖြစ်စေရန်စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မှီခိုအတွက် norepinephrine ၏အခန်းက္ပ
အဆိုပါα၏ဆိုးကျိုးများ1 မှီခိုကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် prazosin adrenergic အဲဒီ receptor ရန်။ 30 နှင့် 0.0 အောက်ပါ nondependent နှင့်အီသနော-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် 1.5 မိအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအီသနောအဘို့ (က) ပေမဲ့ (± SEM) တုံ့ပြန်မှု ...
8 ။ မှီခိုအတွက် CRF နှင့် norepinephrine interaction က၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် cellular အခြေခံ
electrophysiological နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ဆယ်လူလာလေ့လာမှုများတိုးချဲ့ amygdala ၏ interneurons အတွင်း၌γ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) လှုပ်ရှားမှု (မှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာဘို့စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှု၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါပြခဲ့ကြKoob, 2008) ။ CRF သူ့ဟာသူဂါဘမြို့သားပိုကောင်းစေပါတယ်A inhibitory postsynaptic ဦးနှောက်အချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ်အသံသွင်းအတွက်အလားအလာ (IPSCs), ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု CRF ပိတ်ဆို့နေသည်1 ရန်နှင့် CRF အတွက်ပိတ်ထားသည်1 နောက်ကောက်ကြွက် (Nie et al ။ , 2004; Kash နှင့် Winder, 2006) ။ အဆိုပါ amygdala ခုနှစ်, CRF (enkephalin colocalize သောသူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအိပ်ရာပု stria terminalis ၏နျူကလိယနှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် GABAergic အာရုံခံတစ် subpopulation အတွင်းဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်နေ့ et al ။ , 1999).
norepinephrine အဘို့, သက်သေအထောက်အထားအချပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအနေဖြင့်လုံးဆဲလ်အသံသွင်း norepinephrine GABAergic neurotransmission တိုးမြှင့်ကြောင်းသရုပ်ပြထားတဲ့အတွက် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူယန္တရားအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါ noradrenergic အကျိုးသက်ရောက်မှုαမှတဆင့်ဖြစ်ထငျရှား1 အဲဒီ receptor (Dumont နှင့်ဝီလျံ, 2004) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယနှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယကနေဒေတာတွေကိုပေါင်းစပ်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်အချို့တသမတ်တည်းထင်ရှားနေသောခေါင်းစဉ်: CRF နှင့် norepinephrine GABAergic လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်, neuropharmacological နှင့်အတူအထက်ဖော်ပြထားတဲ့အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှအပြိုင်သောဆယ်လူလာ level မှာလုပ်ရပ်များ လေ့လာမှုများ။
GABAergic မူးယစ်ဆေးဝါးများပုံမှန်အားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့ anxiolytics ဖြစ်ကြသည်သောကြောင့်, anxiogenic ကဲ့သို့ neurotransmitters GABAergic neurotransmission နှင့် anxiolytic ကဲ့သို့ neurotransmitters ကိုသက်ဝင်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများတဲ့ဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ GABAergic ဂီယာဝိရောဓိထင်ရစေခြင်းငှါစိတ်ကျရောဂါလိမ့်မယ်။ သို့သော် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းဒေသခံ GABAergic လှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်သတင်းအချက်အလက်ကို (amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ disinhibition အသုံးပြုပုံဥပမာ) ဒေသခံအချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdaloidal ဆားကစ်ကတဆင့်စီးဆင်းထိန်းညှိသော amygdala Gates ၏ inhibitory အလယ်ပိုင်းနျူကလိယ၏အာရုံခံ Response function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ အဆိုပါအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (ဖျန်ဖြေကြောင့်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင်တိုးမြှင့်တားစီးဖို့သဖန်းသီး။ 6).
စိတ်ခွန်အားနိုးရုပ်သိမ်းရေးအတွက် CRF နှင့် norepinephrine စပ်လျဉ်း amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် Neurocircuitry ။ CRF hypothalamic နှင့် midbrain စိတ်ခံစားမှုစနစ်များကိုထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်း GABAergic interneurons မောင်းထုတ်ရန်သာတွေးဆ, ဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ရိုက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက် neurotransmission အတွက်အပြောင်းအလဲများဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု / Anti-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ၏လုပ်ရပ်များမှ GABAergic အာရုံခံဆဲလျာင်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲမှာအီသနောထုတ်လုပ်အဆိုပါလုပ်ခဲ့ပြီးဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်, မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များပင်ထပ်မံတိုးမြှင့် electrophysiological အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသရုပ်ပြခြင်းနှင့် Vivo အတွက် microdialysis အစီအမံ (ရောဘတ် et al ။ , 2004) ။ GABAergic IPSCs ၏အီသနော-သွေးဆောင်တိုးမြှင့် CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်1 ရန် (Nie et al ။ , 2004; ရောဘတ် et al ။ , 2004) နှင့် CRF အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရ1 နောက်ကောက်ကြွက် (Nie et al ။ , 2004) ။ ထို့ကြောင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်းဂါဘမြို့သား interneurons ၏အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအတွင်းနာတာရှည်အီသနော-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုအလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အမူအကျင့်ရလဒ်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း CRF ၏လုပ်ရပ်များမှဆယ်လူလာ level မှာဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအများစုတွင် neuron GABAergic (ဖြစ်ကြောင်းကိုပေးထားနေရောင်နှင့် Cassell, 1993), စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ်မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်ဖြန်ဖြေသည့်ယန္တရား) (brainstem သို့မဟုတ်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများဖို့ stria terminalis ၏ဥပမာအိပ်ရာနျူကလိယမှုများထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ် feed ကို-ရှေ့ဆက်ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ် inhibitory projection အာရုံခံနှင့်အတူ inhibitory အာရုံခံဖြစ်စေရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdaloidal ဆားကစ်ကတဆင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိတဲ့ "တံခါးဝ" ဖွတွေးဆနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင် GABAergic inhibitory စနစ်၏ဒဏ်ငွေ-tuning (မြစ်အောက်ပိုင်းအရေးပါမှနှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့် output ကိုအာရုံခံထိန်းချုပ်များအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်သဖန်းသီး။ 6).
9 ။ ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်စွဲ
ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားကဲ့သို့သောအခြားနာတာရှည်ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ဆင်တူမူးယစ်ဆေးစွဲ, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုဆိုးလာရင်, သိသာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဥပမာပြင်ပဖိအား) ကိုဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်, ပင်လအတွင်းလျင်မြန်စွာ "re-စွဲ" ခွင့်ပြုမယ့်ကျန်နေတဲ့အာရုံကြောသဲလွန်စအရွက် detoxification နှင့်နေကြပြီးနှင့်နှစ်ပေါင်း။ မူးယစ်ဆေးစွဲဤလက္ခဏာများစိတ်ခံစားမှု function ကို၏ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး homeostatic dysregulation ထက်ပိုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန်ဦးဆောင်ပေမယ့်အစားတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောချိုးအတိုင်းဤစနစ်များ homeostasis နှင့်အတူ (allostasis ချေါပါပွီKoob နှင့် Le Moal, 2001; Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ ဤနေရာတွင်ကွပ်ထားတဲ့အယူအဆမူးယစ်ဆေးစွဲတိရစ္ဆာန်၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ထိန်းညှိကြောင်း homeostatic ဦးနှောက်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူတစ်ချိုးကိုကိုယ်စားပြုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Allostasis (အနေနဲ့ပြောင်းလဲ set ကိုအမှတ်နှင့်အတူပြောင်းလဲမှုကတဆင့်တည်ငြိမ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်Sterling နှင့် Eyer, 1988) နှင့်မဟုတ်ဘဲ homeostasis ၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများထက် feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားပါဝငျသညျ။ တစ်ဦးကအစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ယန္တရားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တောင်းဆိုချက်များကိုတွေ့ဆုံဘို့များစွာသောအားသာချက်များရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, homeostasis အတွက်တိုးမြှင့်လိုအပ်တဲ့ signal ကိုထုတ်လုပ်အခါ, အနှုတ်လက္ခဏာတုန့်ပြန်ချက်လိုအပ်ကြောင်းပြင်ပေးနိုင်ပါသည်, သို့သော်လိုအပ်သောအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်နိုင်ပါသည်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသစ်တစ်စုံအချက်များဆီသို့အားလုံး parameters တွေကိုလိုအပ်နေခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပွနျလညျပွုပွငျ၏စဉ်ဆက်မပြတ် reevaluation allostasis အတွက်ပေါ်ပေါက်ဖို့တွေးဆသည်။ အဆိုပါစနစ်များကို homeostasis ပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းရန်လုံလောက်သောအချိန်မရှိဘူးဆိုပါကလျင်မြန်စွာအရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးဖို့နဲ့ feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားများသုံးစွဲဖို့ဒါဟာစွမ်းရည်တစ်ခု allostatic ပြည်နယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ တစ်ဦး allostatic ပြည်နယ် ယင်း၏သာမန် (homeostatic) လည်ပတ်မှုအဆင့်ကနေစည်းမျဉ်းစနစ်၏နာတာရှည်သှဖေတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ကွပ်ထားတဲ့အယူအဆဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ homeostasis (အလွန်အကျွံမူးယစ်ဆည်းပူးနေ) ကိုမျှော်မှန်းစိန်ခေါ်မှုများမှလျှင်မြန်စွာကိုတုံ့ပြန်ပေမယ့် (habituate နှေးနေကြသည်သို့မဟုတ်အလွယ်တကူတစ်ကြိမ်စေ့စပ်ပိတ်ထားကြဘူးကြောင်းKoob, 1999) ။ လုံလောက်သောအချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုတုန့်ပြန်ပိတ်ထားဖို့ကိုမရရှိနိုင်လျှင်ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလျင်မြန်စွာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုခွင့်ပြုသောအလွန်ဇီဝကမ္မယန္တရားရောဂါဗေဒ၏အင်ဂျင်ဖြစ်လာသည်။ သည်အခြားဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအနေဖြင့်ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ brainstem နှင့် Basal forebrain အတွက် CRF နှင့် norepinephrine အကြားအပြန်အလှန်, (စွဲတွေနဲ့ဆက်စပ်နာတာရှည်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ပြည်နယ်များမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်Koob နှင့် Le Moal, 2001).
ထိုသို့သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များသိသိသာသာအလွဲသုံးစားမှုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးများထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကစေ့စပ်ပေမယ့်မူးယစ်ဆေး-ရှာဖို့ relapse နှင့်ဆက်စပ်နှစ်ခု domains များအတွက်လည်းနာတာရှည် "ထိခိုက်" ဖြစ်ကြ၏။ ပထမဦးဆုံးအဒိုမိန်းပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence ၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမြောက်မြားစွာလက္ခဏာတွေရှည်လျားအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထံမှစူးရှဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ (ရှည်လျားအရက်သေစာ abstinence ဥပမာ, ကျယ်ပြန့်တင်းမာမှု, အရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတွင်းရှိလူသားများအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာလျက်ရှိသည်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖွင့်5မှလ9ရက်သတ္တပတ် Post-ဆုတ်ခွာကနေဆက်လက်တင်ပြပြီRoelofs, 1985; Alling et al ။ , 1982) ။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေ, Post-စူးရှရုပ်သိမ်းရေး, (သဘာဝနှင့် subacute အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်နှင့်မကြာခဏ relapse အရင်အဦးနေရာလေ့Hershon, 1977; Annie et al ။ , 1998) ။ relapse ၏တစ်ဦးကဦးဆောင်မိုးရွာသွန်းမှု (အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်Zywiak et al ။ , 1996; Lowman et al ။ , 1996) ။ အရက်မှီခိုနှင့်အခြား DSM-IV စိတ်ဓါတ်များရောဂါများအတွက်စံတွေ့ဆုံမဟုတ်အတူ 12 ရက်သတ္တပတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်လူနာတစ်ဦးအလယ်တန်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်, relapse နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့နှင့် subclinical အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ် (အထူးသဖြင့်ခိုင်မာသောMason ဆို et al ။ , 1994) ။ တိရိစ္ဆာန်အလုပ်ကြိုတင်မှီခိုယခင်ကမှီခိုတိရိစ္ဆာန်များမှီခိုလုပ်ထိုကဲ့သို့သောကို "မှီခိုတံခါးခုံကို" ကိုထပ် (ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အရက်ကိုလက်ခံရရှိအုပ်စုများထက်ပိုမိုပြင်းထန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေပြသလျော့နည်းစေတယ်လေကြောင်းပြသထားပါတယ်Branchey et al ။ , 1971; Baker နှင့် Cannon, 1979; Becker ကနှင့် Hale က, 1989; Becker က, 1994) ။ အထီး Wistar ကြွက်များတွင်မှီခို၏သမိုင်းစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့် detoxification (အပြီးတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ရောဘတ် et al ။ , 2000; Rimondini et al ။ , 2002, 2008; Sommer et al ။ , 2008) ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးလည်း (ဖိအားတိုးမြှင့်အပြုအမူ Response ဖြင့်လိုက်ပါသွားခြင်းနှင့်ဦးနှောက် CRF စနစ်များရန်တုံ့ပြန်တိုးပွါးValdez et al ။ , 2003, 2004; Gehlert et al ။ , 2007; Sommer et al ။ , 2008).
ဒုတိယဒိုမိန်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement မှာပြထားတဲ့မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ၏ reinstatement ဖို့တိုးလာ sensitivity ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဖိအားအမျိုးမျိုးလူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံး, မူးယစ်ဆေး-ရှာပြန်လည်ပါလိမ့်မယ်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်, ပုံမှန်အားမူးယစ်ဆေး-ရှာမူးယစ်ဆေးမရှိဘဲမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံပတ်ဝန်းကျင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအားဖြင့်ငွိမျးနှင့်အော်ပရေတာအခြေအနေများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမရှိဘဲအော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်။ ထိုကဲ့သို့သော footshock, လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု, ဒါမှမဟုတ် pharmacological စိတ်ဖိစီးမှုများ (ဥပမာ, yohimbine) အဖြစ်တစ်ဦးကဖိအား, မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ reinstates ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement များ၏အာရုံကြော circuitry (အထကျဖျောပွထားသစူးရှသောစိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ၏တွေနဲ့သိသိသာသာထပ်ရှိပါတယ်Shaham et al ။ , 2003) ။ မှီခို၏သမိုင်း (စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement တိုးပွါးလျူနှင့် Weiss, 2002).
ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိန်ခေါ်မှုများ (ဥပမာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း) တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သော်လည်းကုန်ကျစရိတ်မှာရန်, မော်လီကျူးဆယ်လူလာနှင့် neurocircuitry အပြောင်းအလဲများကနေတစ်ဆင့်ဦးနှောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်မူဘောင်, ဒီမှာကပုံမှန်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း (ဆိုလိုသည်မှာယင်းကနေကျန်နေတဲ့သွေဖည်အသေးစိတ်ရှင်းလင်း allostatic ပြည်နယ်) ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ function ကို, အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, နှိုးဆွ-တုံ့ပြန်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၏ပံ့ပိုးနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအထူးသစုဆောင်းမှုလျော့နည်းသွားအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ neurobiological အပြောင်းအလဲကမီးလောင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုးယူဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုထပ်မံမူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်း (အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေမှမူးယစ်ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေနှင့် relapse ၏ compulsive အထောက်အကူပြုဖို့တွေးဆကြသည်Koob, 2009).
10 ။ အကျဉ်းချုပ်နှင့်ကောက်ချက်
အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှ acute ဆုတ်ခွာစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိတစ်ဦးချင်းစီ၏ဆုလာဘ်တံခါးခုံ, စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကို၎င်း, amygdala အတွက် CRF, တိုးပွားစေပါသည်။ မှီခိုနှင့်ဆက်စပ် compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆုလာဘ်စနစ်များ function ကိုဆုံးရှုံးဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောတိုးချဲ့ amygdala အတွက် CRF နှင့် norepinephrine အဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များစုဆောင်းမှုသာကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဦးနှောက် arousal / စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုမောင်းနှင့်အခြား psychopathologies ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူထပ်စေခြင်းငှါ၎င်းအနှုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှကနေထုတ်ဝေအရေအတွက်ကို 19930 ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနအရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနနှင့်ဆီးချိုရောဂါအမျိုးသား Institute မှကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေအရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အရက်, DA06420 နှင့် DA08459 ထံမှ AA04043 နှင့် AA04398 ပေးအပ်နှင့် DK26741 များအတွက် Pearson ရေးစင်တာတို့ကထောက်ခံခဲ့သည် နှင့် Digestive နှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများ။ ရေးသားသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဘို့သူ Mike Arends ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
Akbarian S က, ဘိတ် B, လျူ RJ, Skirboll SL, Pejchal T က, Coppola V ကို Sun, ld, ဝါသနာရှင်, G, Kucera J ကို, Wilson ကနေ MA, Tessarollo L ကို, Kosofsky BE, တေလာ JR, Bothwell M က, Nestler EJ, Aghajanian GK, Jaenisch R ကို ။ Neurotrophin-3 noradrenergic အာရုံခံဆဲလျ function ကိုနှင့် opiate ဆုတ်ခွာ modulates ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;6: 593-604 ။ [PubMed]
Akbarian S က, Rios M က, လျူ RJ, ရွှေ SJ, Fong သည် HF, Zeiler S က, Coppola V ကို, Tessarollo L ကို, ဂျုံးစ် KR, Nestler EJ, Aghajanian GK, Jaenisch R. ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် noradrenergic ၏ opiate-သွေးဆောင် plasticity များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ် အာရုံခံ။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 4153-4162 ။ [PubMed]
Alheid gf, အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက်အထူးဆီလျော်၏ Basal forebrain အဖှဲ့အစညျးမှာ Heimer အယ်လ်နယူးအမြင်များ: အ striatopallidal, amygdaloid နှင့် substantia innominata ၏ corticopetal အစိတ်အပိုင်းများကို။ neuroscience ။ 1988;27: 1-39 ။ [PubMed]
Alling ကို C, Balldin J ကို, Bokstrom K ကို Gottfried CG, Karlsson ငါအီသနော၏နာတာရှည်အလွဲသုံးစားမှုပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းကပြန်လည်နာလန်ထူကာလကြာချိန်ပေါ် Langstrom G. အလေ့လာရေး: ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့စိတ်ရောဂါညွှန်းကိန်းတစ်ခု Cross-Section လေ့လာမှု။ Acta Psychiatric Scand ။ 1982;66: 384-397 ။ [PubMed]
Alonso, G, Szafarczyk တစ်ဦးက, Balmefrezol M က, ကြွက်များတွင် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းနှင့် vasopressin secreting အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ parvocellular အာရုံခံ၏ ventral noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးတို့က stimulatory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Assenmacher ဗြဲ Immunocytochemical သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 1986;397: 297-307 ။ [PubMed]
American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4th ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1994 ။
Amit Z ကိုဘရောင်း ZW, Levitan DE, Ogren SO ။ အီသနော၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ Noradrenergic ဖျန်ဖြေ: dopamine-beta-hydroxylase တားစီးအောက်ပါဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုဗြဲနှိမ်နင်းရေး။ Arch Int Pharmacodynam Ther ။ 1977;230: 65-75 ။
HM, Sklar သည် SM တခု AE Annis ။ relapse အကျပ်အတည်းအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. ကျား, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်ကုသအရက်သမားတို့တွင်အရလဒ်ကို။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 1998;23: 127-131 ။ [PubMed]
Baker တီဘီ, Cannon DS ။ ကြိုတင်မှီခိုအားဖြင့်အီသနောဆုတ်ခွာ၏အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 1979;60: 105-110 ။ [PubMed]
Baldwin HA, Rassnick S က, Rivier J ကို, Koob gf, Britton KT ။ CRF ရန်ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာရန် "anxiogenic" တုန့်ပြန်နောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 1991;103: 227-232 ။ [PubMed]
ဘေးလ် TL, ခြိုငျ့ WW ။ CRF နှင့် CRF receptors: စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အခြားအပြုအမူတွေအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 2004;44: 525-557 ။ [PubMed]
Basso လေး, Spina M က, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်ရန်ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကင်းအောက်ပါမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္အတွက်ခုခံကာကွယ်မွှေးပါရာဒိုင်းရှိ "anxiogenic-ကဲ့သို့" အကျိုးသက်ရောက်မှု attenuates ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Psychopharmacology ။ 1999;145: 21-30 ။ [PubMed]
Becker က HC ။ ကြိုတင်အီသနောဆုတ်ခွာဖြစ်စဉ်များ၏နံပါတ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုတ်ခွာသိမ်းယူမှု၏ပြင်းထန်မှုအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ Psychopharmacology ။ 1994;116: 26-32 ။ [PubMed]
Becker က HC, Hale က RL ။ RO57-6 အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ C15BL / 4513 ကြွက်တွေမှာအီသနော-သွေးဆောင် locomotor ဆွ။ Psychopharmacology ။ 1989;99: 333-336 ။ [PubMed]
Borg က S, Kvande H ကို, စွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်အရက်မူးယစ်စဉ်အတွင်း Sedvall G. အဗဟို norepinephrine ဇီဝြဖစ်။ သိပ္ပံ။ 1981;213: 1135-1137 ။ [PubMed]
Borg က S, Czamecka တစ်ဦးက, Kvande H ကို, Mossberg D ကို, ဆုတ်ခွာစဉ်ကအထီးအရက်လူနာများ၏ cerebrospinal fluid အတွက် Sedvall G. အလက်တွေ့အခြေအနေများနှင့် MOPEG ၏ပြင်းအား။ အရက် Clin Exp Res ။ 1985;9: 103-108 ။ [PubMed]
Branchey M က, Rauscher, G, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအောက်ပါအရက်ဖို့တုန့်ပြန် Kissin ခပြုပြင်မွမ်းမံ။ Psychopharmacologia ။ 1971;22: 314-322 ။ [PubMed]
Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Navarro အမ်မတိုင်မီကမျိုးစုံအီသနောထုတ်ယူစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်: CRF အားဖြင့်တားစီး1- နှင့် benzodiazepine-receptor ရန်နှင့် 5-HT1a-receptor agonist ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 1662-1669 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘရောင်း ZW, Amit Z. ကြွက်များတွင်အီသနော preference ကိုအပေါ် 6-hydroxydopamine နေဖြင့်ရွေးချယ် catecholamines ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience လက်တ။ 1977;5: 333-336 ။ [PubMed]
Burchfield အက်စ်အဆိုပါစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု: အသစ်တစ်ခုကိုရှုထောင့်။ Psychosom Med ။ 1979;41: 661-672 ။ [PubMed]
ချာလ်တန် BG, Ferrier IN, ပယ်ရီ RH အ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity ၏ဖြန့်ဝေ။ Neuropeptides ။ 1987;10: 329-334 ။ [PubMed]
Davis က WM, Werner TE, Smith ကစင်ကာပူဒေါ်လာ။ အီသနော၏ intragastric တာဟာနှင့်အတူအားဖြည့်: FLA 57 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1979;11: 545-548 ။ [PubMed]
Interleukin-1βနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရွေးချယ် activation အဘို့သက်သေအထောက်အထား: အ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ကြွက်အလယ်ပိုင်းနျူကလိယထဲမှာနေ့ HE, Curran EJ, Watson ဟာ SJ, Jr က Akil အိပ်ချ်ထူးခြားသော neurochemical လူဦးရေ J ကို comp Neurol ။ 1999;413: 113-128 ။ [PubMed]
Delfs JM, Zhu Y ကို, Druhan JP, Aston-ဂျုံးစ် G. အ Noradrenaline အဆိုပါ ventral forebrain အတွက် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဘို့အရေးကြီးသည်။ သဘာဝ။ 2000;403: 430-434 ။ [PubMed]
Dumont EC, Williams က JT ။ Noradrenaline ဂါဘမြို့သားကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းA အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း stria terminalis အာရုံခံ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏တားစီး။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 8198-8204 ။ [PubMed]
ဖူ Y ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, Brower VG, Sharp က BM ။ တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနီကိုတင်းရန်န့်အသတ် access ကိုစဉ်အတွင်းကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် Norepinephrine Secret ။ J ကို neuroscience ။ 2001;21: 8979-8989 ။ [PubMed]
ဖူ Y ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, ကိန်း vB, Sharp က BM ။ နာတာရှည်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းကြွက်၏ amygdala အတွက် Norepinephrine လွှတ်ပေးရန်: တစ်ခု Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ Neuropharmacology ။ 2003;45: 514-523 ။ [PubMed]
Fujimoto တစ်ဦးက, Nagao T က, Ebara T က, Sato က M, Otsuki အက်စ် Cerebrospinal အရည် monoamine metabolites အရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983;18: 1141-1152 ။ [PubMed]
funk CK, O'Dell LE, ခရော EF, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း Corticotropin-releasing အချက်ဆုတ်ခွာ, အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်တိုးမြှင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2006;26: 11324-11332 ။ [PubMed]
funk CK, Zorrilla EP, Lee က MJ, ဆန် KC, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက် 1 ရန်ရွေးချယ်အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;61: 78-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gehlert DR, Cippitelli တစ်ဦးက, Thorsell တစ်ဦးက, က Le အေဒီ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Hamdouchi ကို C, Lu က J ကို, Hembre EJ, Cramer J ကို, သီချင်း M က, McKinzie: D, Morin က M, Ciccocioppo R ကို, Heilig အမ် 3- (4-Chloro-2 -morpholin-4-yl-thiazol-5-yl) -8- (1-ethylpropyl) -2,6-dimethyl-imidazo [1,2-ခ] pyridazine: အတူနှုတ်မရရှိနိုင်ပါ, ဦးနှောက်-ထိုးဖောက်မှုဝတ္ထု corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor 1 ရန် အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ထိရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 2718-2726 ။ [PubMed]
George O, Ghozland S, Azar MR, Cottone P, Zorrilla EP, Parsons LH, O'Dell LE, Richardson HN, Koob GF CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc Natl Acad, သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007;104: 17198-17203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Greenwell TN, Funk CK, ဝါဂွမ်း P ကိုရစ်ချတ်ဆင် HN, Chen က SA, ဆန် K သည်, Lee က MJ, Zorrilla EP, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ရန် long- ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့ပေမယ့်မရရေတို access ကိုကြွက်များ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2009a;14: 130-143 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Greenwell TN, Walker က BM, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Koob gf ။ အဆိုပါα1 adrenergic အဲဒီ receptor ရန် prazosin ဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009b;91: 295-302 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အβ-Adrenergic ရန် cocaine- နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စိုးရိမ်စိတ် attenuate ။ Psychopharmacology ။ 1993;113: 131-136 ။ [PubMed]
Hauger RL, Grigoriadis DE, Dallman MF, Plotsky pm တွင်, ခြိုငျ့ WW, Dautzenberg FM ရေ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏နိုင်ငံတကာယူနီယံ: XXXVI ။ corticotropin-releasing အချက်နှင့်၎င်းတို့၏ ligands များအတွက် receptors များအတွက် nomenclature ၏လက်ရှိအခြေအနေ။ Pharmacol ဗျာ 2003;55: 21-26 ။ [PubMed]
Heilig M က, Koob gf ။ အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007;30: 399-406 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Heimer L ကို, Alheid G. အ Basal forebrain ခန္ဓာဗေဒ၏ပဟေဠိအတူတကွ Piecing ။ ခုနှစ်တွင်: Napier TC, Kalivas PW, Hanin ငါအယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal Forebrain: ခန္ဓာဗေဒ function ရန်။ စမ်းသပ်ဆေးပညာနှင့်ဇီဝဗေဒတိုးတက်လာ။ vol ။ 295 ။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1991 ။ စစ။ 1-42 ။
အဆိုပါ amygdala အတွက် Heinrich SC, Menzaghi က F, Schulteis, G, Koob gf, corticotropin-releasing အချက်၏ Stinus အယ်လ်နှိမ်နင်းရေးမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuates ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1995;6: 74-80 ။ [PubMed]
Hennessy JW, Levine အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု, arousal, နှင့် pituitary-adrenal system ကို: တစ် psychoendocrine ယူဆချက်။ ခုနှစ်တွင်: Sprague JM, Epstein AN, အယ်ဒီတာများ။ Psychobiology နှင့်ဇီဝစိတ်ပညာတိုးတက်မှု။ 8th ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1979 ။ စစ။ 133-178 ။
Hershon HI ။ အရက်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အရက်သောက်အပြုအမူ။ J ကိုလုံးအရက်။ 1977;38: 953-971 ။ [PubMed]
Johnston JB ။ အဆိုပါ forebrain ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏လေ့လာမှုမှထပ်မံပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို comp Neurol ။ 1923;35: 337-481 ။
Kash TL, Winder DG ။ Neuropeptide Y ကိုများနှင့်က c orticotropin-releasing အချက် bi-directionally အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် inhibitory Synaptic ဂီယာ modulate ။ Neuropharmacology ။ 2006;51: 1013-1022 ။ [PubMed]
Knapp DJ သမား, Overstreet DH, Moy အက်စ်အက်စ်, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ SB242084, flumazenil နှင့်ကြွက်များတွင် CRA1000 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်။ အရက်။ 2004;32: 101-111 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်, norepinephrine နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;46: 1167-1180 ။ [PubMed]
Koob gf ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ Allostatic အမြင်: psychopathology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Bevins RA, Bardo MT, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ Etiology အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များ။ Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ vol ။ 50 ။ Nebraska စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; လင်ကွန်း NE: 2004 ။ စစ။ 1-18 ။
Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008;59: 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက် compulsive ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းဘို့ Neurobiological အလွှာဟာ။ Neuropharmacology ။ 2009;56(ပျော့ပျောင်း 1): 18-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ။ 1997;278: 52-58 ။ [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology ။ 2001;24: 97-129 ။ [PubMed]
Koob gf, ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ 'မှောင်မိုက်ဘက်' '၏သည် Le Moal အမ်ပလပ်စတစ်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8: 1442-1444 ။ [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ် စွဲလမ်းမှု၏ Neurobiology ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: 2006 ။
Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008;59: 29-53 ။ [PubMed]
Lewis ကငွေကျပ်လီကို C, Perrin MH, Blount တစ်ဦးက, Kunitake K ကို Donaldson ကို C, Vaughan J ကို, Reyes TM, Gulyas J ကို, Fischer W က, Bilezikjian L ကို, Rivier J ကို, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ WW ။ urocortin III ၏ identification, အ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ကို CRF2 အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူမိသားစုတစ်ခုအပိုဆောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2001;98: 7570-7575 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လီကို C, Vaughan J ကို, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ WW ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Urocortin III ကို-immunoreactive စီမံချက်များ: type ကို2corticotrophin-releasing အချက်အဲဒီ receptor ထုတ်ဖော်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 991-1001 ။ [PubMed]
လျူက X, အီသနောရှာ၏ reinstatement အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို Weiss အက်ဖ် Additional အကျိုးသက်ရောက်မှု: corticotropin-releasing အချက်နှင့် opioid ယန္တရားများ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation ၏မှီခိုနှင့်အခန်းကဏ္ဍ၏သမိုင်းအားဖြင့် exacerbation ။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 7856-7861 ။ [PubMed]
Lowman ကို C, Allen က J ကို, ရဲရငျ့စှာပွော RL ။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း Marlatt ၏ထပ်မံသက်ရောက်သောမိုးရွာသွန်းမှုများ - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ရလဒ်များခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ အဆိုပါ Relapse သုတေသနအဖွဲ့။ စွဲလမ်း။ 1996;91(ပျော့ပျောင်း): S51-S71 ။ [PubMed]
Mason ဆို ST, Corcoran ME, Fibiger HC ။ ကြွက်များတွင် Noradrenaline နှင့်အီသနောစားသုံးမှု။ neuroscience လက်တ။ 1979;12: 137-142 ။ [PubMed]
Mason ဆို BJ, Ritvo EC, မော်ဂန် ro, Salvato FR, Goldberg, G, Welch, B, Mantero-Atienza အီးအရက်မှီခိုဘို့ပါးစပ် nalmefene HCl ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုအကဲဖြတ်ဖို့တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 1994;18: 1162-1167 ။ [PubMed]
Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, ချစ်သူများနေ့ JD, Sharp က BM ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ extrahypothalamic ဒေသများတွင် CRH အာရုံခံ၏နီကိုတင်းကို Activation ။ endocrine ။ 1997;7: 245-253 ။ [PubMed]
Merlo-Pich အီး, Lorang M က, Yeganeh M က, Rodriguez က de Fonseca က F, Raber J ကို, Koob gf, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကနိုးကြွက်များ၏ amygdala အတွက် extracellular corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆင့်ဆင့်၏ Weiss အက်ဖ်တိုးတက်တိုင်းတာအဖြစ် microdialysis ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1995;15: 5439-5447 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Alreja M က, Aghajanian GK ။ opiate လုပ်ဆောင်ချက်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများ: ကြွက် locus coeruleus အတွက်လေ့လာမှုများ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1994;35: 521-528 ။ [PubMed]
Nie Z ကို, Schweitzer P ကို, Roberts သည် AJ, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနော CRF ကနေတဆင့်ဗဟို amygdala အတွက် GABAergic ဂီယာကိုကြီးထွားများပြားစေ1 receptors ။ သိပ္ပံ။ 2004;303: 1512-1514 ။ [PubMed]
သံလွင် MF, Koenig HN, Nannini MA, Hodge CW ။ နောက်ဆက်တွဲအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်လျော့ချရေးစဉ်အတွင်း stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် extracellular CRF အဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002;72: 213-220 ။ [PubMed]
Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ CRF နှင့် CRF ခြင်းဖြင့်မျိုးစုံအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ Modulation1 receptors ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004;77: 405-413 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pfaff ဃ ဦးနှောက် arousal နှင့်သတင်းအချက်အလက်သီအိုရီ: ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်မျိုးဗီဇယန္တရားများ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကင်းဘရစ်နေ MA: 2006 ။
Rassnick S က, Heinrich SC, Britton KT, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ corticotropin-releasing အချက်ရန်၏ Microinjection အီသနောဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနောက်ကြောင်းပြန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1993;605: 25-32 ။ [PubMed]
Reyes TM, Lewis ကငွေကျပ်, Perrin MH, Kunitake KS, Vaughan J ကို, Aria, CA, Hogenesch JB, Gulyas J ကို, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ WW, Sawchenko PE ။ Urocortin II ကို: ရွေးချယ်အမျိုးအစား2CRF receptors အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်သော corticotropin-releasing အချက် (CRF) neuropeptide မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2001;98: 2843-2848 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရစ်ချတ်ဆန် HN, Zhao နှင့် Y ကို, Fekete EM, Funk CK, Wirsching P ကို, Janda KD, Zorrilla EP, Koob gf ။ MPZP: တစ်ဝတ္ထုသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး corticotropin-releasing အချက်အမျိုးအစား 1 အဲဒီ receptor (CRF1) ရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;88: 497-510 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရစ်ချတာ RM, Weiss အက်ဖ် Vivo အတွက် ကြွက် amygdala အတွက် CRF လွှတ်ပေးရန် Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုးလာနေပါတယ်။ synapses ။ 1999;32: 254-261 ။ [PubMed]
Rimondini R ကို, Arlinde ကို C, Sommer W က, မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် Heilig အမ် Long-တည်တံ့တိုးနှင့်အရက်ဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ FASEB ဂျေ 2002;16: 27-35 ။ [PubMed]
Rimondini R, Sommer WH, Dall'Olio R, Heilig M. မှီခိုမှုသမိုင်းအရအရက်ကိုကြာရှည်ခံသည်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2008;13: 26-30 ။ [PubMed]
ရောဘတ်က M, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Stouffer DG, Parsons LH, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနော-မှီခိုကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်။ J ကို neuroscience ။ 2004;24: 10159-10166 ။ [PubMed]
ရောဘတ် AJ, Heyser CJ, Cole ကို M က, Griffin P ကို, Koob gf ။ မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါအလွန်အကျွံအီသနောအရက်သောက်: allostasis ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2000;22: 581-594 ။ [PubMed]
Rodriguez က de Fonseca က F, Carrera မြ, Navarro M က, Koob gf, cannabinoid ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း limbic စနစ် corticotropin-releasing အချက်၏ Weiss အက်ဖ် Activation ။ သိပ္ပံ။ 1997;276: 2050-2054 ။ [PubMed]
Roelofs သည် SM ။ အရက်များအတွက် Hyperventilation, စိုးရိမ်စိတ်, တဏှာ: တစ် subacute အရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ။ အရက်။ 1985;2: 501-505 ။ [PubMed]
Rohrer DK, Kobilka ကယ်။ adrenergic receptor မျိုးရိုးဗီဇထုတ်ဖော် Vivo ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်ထံမှ Insights ။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol ။ 1998;38: 351-373 ။ [PubMed]
Sarnyai Z ကို, Biro အီး, Gardi J ကို, Vecsernyes M က, Julesz J ကို, Telegdy G. အဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက်ကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် "စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော" အပြုအမူ mediates ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995;675: 89-97 ။ [PubMed]
Schulteis, G, Stinus L ကို, Risbrough vB, Koob gf ။ Clonidine လုပ်ကွက်ဝယ်ယူပေမယ့်ကြွက်များတွင် conditional opiate ဆုတ်ခွာမစကားရပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 1998;19: 406-416 ။ [PubMed]
Selye အိပ်ချ်ကွဲပြားခြားနား nocuous အေးဂျင့်များကထုတ်လုပ်တစ်ဦးက syndrome ရောဂါ။ သဘာဝ။ 1936;138: 32 ။
Shaham Y ကို, Shalev ဦး, Lu က L ကို, က de ကျေး H ကို, Stewart ကဂျေမူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်: သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်များ။ Psychopharmacology ။ 2003;168: 3-20 ။ [PubMed]
Sharp က BM, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ။ detection အားဖြင့် Vivo အတွက် ထိုး-မှီခိုနှင့် desensitization: လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယကနေနီကိုတင်း-သွေးဆောင် norepinephrine Secret ၏ microdialysis ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1993;133: 11-19 ။ [PubMed]
Slawecki CJ, Thorsell AK, Khoury AE, သင်္ချာ AA ကို, Ehlers CL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းနှင့်ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် CRF တူသောနှင့် NPY ကဲ့သို့ immunoreactivity တိုးလာ: စိုးရိမ်စိတ်တူသောနှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်း။ Neuropeptides ။ 2005;39: 369-377 ။ [PubMed]
Smith က SM, ခြိုငျ့ WW ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience ။ 2006;8: 383-395 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sommer WH, Rimondini R ကို, Hansson AC အ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Gehlert DR, ဘား CS, Heilig MA ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု, စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့် sensitivity ကိုနှင့် amygdala ၏ Upregulation crhr1 မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါစကားရပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;63: 139-145 ။ [PubMed]
Specio SE, Wee က S, O'Dell LE, Boutrel B, Zorrilla EP, Koob gf ။ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuate ။ Psychopharmacology ။ 2008;196: 473-482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sterling P ကို, Eyer ဂျေ Allostasis: arousal ရောဂါဗေဒရှင်းပြဖို့အသစ်တစ်ခုပါရာဒိုင်း။ Fisher က S နဲ့, အကြောင်းရင်း J ကို, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဘဝကစိတ်ဖိစီးမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ကျန်းမာရေး၏လက်စွဲစာအုပ်။ ယောဟနျသ Wiley; Chichester: 1988 ။ စစ။ 629-649 ။
Stinus L ကို, Le Moal က M, Koob gf ။ နျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအလွှာဖြစ်ကြသည်။ neuroscience ။ 1990;37: 767-773 ။ [PubMed]
Stinus L ကို, Cador M က, Zorrilla EP, Koob gf ။ Buprenorphine နှင့် CRF1 ရန်ကြွက်များတွင် opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏ဝယ်ယူပိတ်ဆို့။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 90-98 ။ [PubMed]
Sun က N ကို, Cassell MD ။ ကြွက်အလယ်ပိုင်းတိုးချဲ့ amygdala အတွက်အခ်ါ GABAergic အာရုံခံ။ J ကို comp Neurol ။ 1993;330: 381-404 ။ [PubMed]
Swanson LW, Sawchenko PE, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ဒဗလျူကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ ovine corticotropin-releasing အချက် immunoreactive ဆဲလ်များနှင့်အမျှင်များ၏အဖွဲ့အစည်းက: တစ်ခု immunohistochemical လေ့လာမှု။ Neuroendocrinology ။ 1983;36: 165-186 ။ [PubMed]
Tucci S က, Cheeta S က, ရှေ P ကို, အရှေ့တောင် File ။ အချက်ရန်, α-helical CRF လွှတ် Corticotropin9-41, နီကိုတင်း-သွေးဆောင်ခြွင်းချက်မရှိ, စိုးရိမ်ပူပန်အေးစက်ပေမယ့်မပေးနောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 2003;167: 251-256 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Zorrilla EP, Roberts သည် AJ, Koob gf ။ corticotropin-releasing အချက်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအီသနော abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တိုးမြှင့်တုန့်ပြန် attenuates ။ အရက်။ 2003;29: 55-60 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Sabino V ကို, Koob gf ။ corticotropin-releasing အချက်-2 အဲဒီ receptor activation ကနေတဆင့်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်: မှီခိုကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2004;28: 865-872 ။ [PubMed]
Valentino RJ, စာမျက်နှာ ME, Curtis AL ။ hemodynamic စိတ်ဖိစီးမှုများက noradrenergic locus coeruleus အာရုံခံ၏ activation corticotropin-releasing အချက်၏ဒေသခံလွှတ်ပေးရန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991;555: 25-34 ။ [PubMed]
Valentino RJ, ခြေလျင် SL, စာမျက်နှာ ME ။ corticotropin-releasing အချက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ noradrenergic ဖျန်ဖြေပေါင်းစပ်ဘို့ site တစ်ခုအဖြစ် locus coeruleus ။ ခုနှစ်တွင်: ရွှေချောင်း Y ကို, Rivier ကို C, အယ်ဒီတာများ။ Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor နှင့် Cytokines: အစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အခန်းက္ပ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ vol ။ 697 ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 1993 ။ စစ။ 173-188 ။
ဗန် Bockstaele EJ, Colago EE, Valentino RJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ခြေလက်အင်္ဂါများ Co-ရာ၌ခန့်များအတွက်အလွှာ: Amygdaloid corticotropin-releasing အချက်ပစ်မှတ် coeruleus dendrites locus ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1998;10: 743-757 ။ [PubMed]
Ventura R ကို, De Carolis: D, Alcaro တစ်ဦးက, Puglisi-Allegra အက်စ်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ်ဟာ prefrontal cortex အတွက် norepinephrine ပေါ်မူတည်သည်။ Neuroreport ။ 2006;17: 1813-1817 ။ [PubMed]
Walker က BM, Rasmussen DD, Raskind MA, Koob gf ။ α1အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက် -Noradrenergic အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလုပ်ကွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုး။ အရက်။ 2008;42: 91-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wee က S, Mandyam CD ကို, Lekic DM, Koob gf ။ α1အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် -Noradrenergic system ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2008;18: 303-311 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weinshenker: D, သံချေး NC, Miller က NS, Palmiter RD ။ norepinephrine ချို့တဲ့ကြွက်၏အီသနော-ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ။ J ကို neuroscience ။ 2000;20: 3157-3164 ။ [PubMed]
Weiss က F, Ciccocioppo R ကို, Parsons LH, Katner S ကိုလျူက X, Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ဘင်-ရက်ရှာဟာအို Angeletti S က, ရစ်ချတာ RR ။ ကိုကင်းစွဲ၏ဇီဝအခြေခံ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ vol ။ 937 ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 2001 ။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse: neuroadaptation, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အေးစက်အချက်များ; စစ။ 1-26 ။
Zorrilla EP, Koob gf ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ ယင်းအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောသိပ္ပံအတွက်နည်းစနစ်။ vol ။ 15 ။ Elsevier သိပ္ပံ; နယူးယောက်: 2005 ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ urocortins 1,2နှင့်3၏အခန်းကဏ္ဍ, စစ။ 179-203 ။
Zywiak WH, Connor GJ, Maisto SA, Westerberg VS. Relapse သုတေသနနှင့်သောက်သုံးရန်မေးမြန်းရသည့်အကြောင်းရင်းများ - Marlatt ၏ပြန်လည်အသက်ဝင်လာမှုဆိုင်ရာ taxonomy ၏အချက်တစ်ချက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ စွဲလမ်း။ 1996;91(ပျော့ပျောင်း): S121-S130 ။ [PubMed]